တရုတ် ၈ လက်မမိုးရေပန်းရေချိုးခန်း၊ မိုးရေရေချိုးခန်းရေပန်း Faucet၊ လက်ကိုင်အိတ်နှစ်မျိုးသုံးတင်ပို့သူ
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:8 လက်မမိုးရေပန်း Faucet,မိုးရေရေချိုးခန်းရေပန်း,Dual Handle ရေချိုးခန်းအရောအနှော,,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေချိုးခန်းအရောနှော > မိုးရေဖျော်စက်
မိုးရေဖျော်စက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, 8 လက်မမိုးရေပန်း Faucet, မိုးရေရေချိုးခန်းရေပန်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Dual Handle ရေချိုးခန်းအရောအနှော R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကြေးဝါစုပ်စက်ရောနှောခြင်းသည် Chromed Hand Shower ဖြင့်ပုတ်ပါ
ဖက်ရှင်စတုရန်းအမျိုးအစား Rain Top Shower ရေချိုးခန်းအစုံ
Shower Faucet သတ်မှတ်ထားသောမိုးရေချိန်များလက်ကိုင်ရေပန်းခေါင်း
Wall-Mount Faucet အိမ်သုံးရေချိုးခန်းရေချိုးကန်
Wall Walled Single Handle Brass Shower ရောနှောစက်
Wall Mounted သံမဏိ Shower Faucet System Set
ကြေးရေချိုးခန်းရေချိုးခန်းဇိမ်ခံရေချိုးခန်း Faucet မိုးရောနှော
ရေချိုးခန်းမိုးရွာသွန်းမှုရေပန်း Faucet ရွှေပွတ်
Functions သုံးခုပါ ၀ င်သောအရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါရေလောင်းစက်
နှင်းဆီရွှေ ဖုံး အုပ်ထားသောရေဆေး ရောနှော ဆေးပိုက်၏တစ်ခုလုံးကိုနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည်ရေချိုးခန်းစနစ်ကိုပိုမိုရိုးရှင်းစေသည်။ Handy ရဲ့ ဇ နှင့် s ကို hower,faucet ရေချွေတာ၏ရည်ရွယ်ချက်ရရှိ, ဒါပေမယ့်လည်းရေချိုးခန်းရေလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမသာ။ မိုးရေစက်ရောနှောခြင်းကို သာ ထိပုတ်ပါ...
Handy's Rose Golden Shower Kit တွင်အစိုင်အခဲပစ္စည်းများနှင့်အလေးချိန်အပြည့်အစုံပါရှိသောကြေးနီပစ္စည်းအပြည့်ပါရှိသည်။ အပြည့်အဝကြေးနီ မိုးရေချိုးခန်းရောနှော Faucet s တွင် ၈ လက်မ (၂၀ စင်တီမီတာ) လုံးရှိကြေးနီထိပ်ဖန်းများနှင့် လက်ပါ ၀ င် သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုပါရှိသည်။...
နေရာလေးကိုရဲ့ခ rass r ကို ain s ကို hower မီတာ ixer ဘုံဘိုင်လက်ဝဲဘက်မှာရေကို Divide ဘီးများက switched ထားတဲ့3ရေထွက်ပေါက်သည် Modes ရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုပိုပြီးအထူးင်တစ်ဦး, r otatable 180 ° s ကို hower aucet,fလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အသုံးမပြုသောအခါ၎င်းကိုဘယ်သို့မဟုတ်ညာသို့လှည့်ပြီး...
Handy's ၏ထွက်ပေါက်ပိုက် s ingle လီဗာ ရေချိုးခန်းအရောနှော ထိပုတ် ပါ 180 °အားဖြင့်လှည့်နိုင်ပါတယ်; မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါကိုတစ်လုံးတည်းသွတ်ထားသောအဓိကကိုယ်ထည်၊ ယူနီဖောင်းနံရံအထူ၊ အားကြီးသောဖိအားခံနိုင်ရည်၊ လှည့်နိုင်သော ရေချိုးခန်း faucet...
Supply နိုင်ခြင်း: 2000sets/month
ယေဘုယျအားဖြင့်နေရာလေးကိုရဲ့ Single-လက်ကိုင်ပန်းရေချိုးခန်းရောနှောဘုံဘိုင်စကားပြောပူရေအေးရှိပြီး, switch ရဲ့အဖွင့်ထောင့်နှင့်အတူအပူချိန်အပြောင်းအလဲများ, များသောအားဖြင့်ပူပြင်းခြင်းနှင့်ညာဘက်ချမ်းအေးထားခဲ့တယ်။ chrome Shower Set...
Handy's Rose Gold Shower Faucet ကိုရွှေနှင့်ကြေးနီအရောအနှောဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ နှင်းဆီရွှေရေချိုးခန်းရောနှော ထိပုတ်ပါ ရှုပ်ထွေးပြီးဆန်းကြယ်သောဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုကိုပြသနိုင်သည့်ခိုင်ခံ့မှုခံနိုင်ရည်၊ မာကျောမှုနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောစရိုက်များရှိသည်။ Handy's နှင်းဆီရွှေ...
ရေချိုးကန်အရောအနှောသည် Hand Shower ဖြင့်ပုတ်ပါ ရေချိုးခန်းအကျယ်အ ၀ န်းသေးပြီးသင်ကအလွယ်တကူရေချိုးနိုင်သည်ဆိုပါက Handy ၏ Simple Shower Set ကို ရွေးချယ်၍ သင်၏အရေပြားတစ်လက်မတိုင်းရေချိုးခြင်း၏ခံစားမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်နေပါစေနေရာမယူပါ။ ထို့အပြင် Handy's Single Handle Shower Faucet...
အရောင်ကိုက်ညီခြင်းသည်အိမ်တွင်းပရိဘောဂအဆင်အပြင်၏သော့ဖြစ်သည်။ သင်၏ရေချိုးခန်းသည်အများအားဖြင့်အေးသောအရောင်များဖြစ်လျှင်သင် Handy's Chrome Shower Faucet ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နွေးထွေးသောအရောင်ဌာနအများစုတွင်ရှိပါက aureate Rain Shower Mixer Taps ကိုသုံးနိုင်သည်၊ ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံး၏စတိုင်သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါက creamy...
မိုးရေချိန်ရေချိုးခန်းအရောအနှော ခေတ်သစ် မိုးရွာသွန်းမှုရေချိုးခန်းအရောအနှော ၊ ကြေးဝါရောနှောအဆို့ရှင်နှင့်သံမဏိပြွန်၊ အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်မိုးမိုးရေခေါင်း ၈ လက်မအကျယ်ရှိသောထိပ် ဦး ခေါင်းနှင့် ၁.၅ မီတာရှိသောရေပိုက်နှင့်လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းအစုံ။ ရေချိုးခန်း တွင်း ပေါင်းစပ်စနစ်များနှင့်အရွယ်အစားအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည်။...
ရွှေဥရောပစတိုင်ရေချိုးခန်း faucet ဖုံးကွယ် Handy's Brass Concealed Shower Set တွင်ရေမှုန်ရေမွှားနှင့်လက် ပန်းရေချိုးခန်း နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလုံခြုံရေးအထုပ်ထိပ်ထိပ်မှုတ်လိမ်းသည်။ ရေချိုးခန်းခေါင်းကိုအလျားလိုက်ပေါင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်အနှုတ် ၁၅ ဒီဂရီညှိနိုင်သည်။...
Water-outlet လုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုဖြင့် Handy's Light ဇိမ်ခံရေချိုးခန်းသတ်မှတ်ထားသော စနစ်သည် single-handle independent switch ဖြစ်ပြီးအလိုအလျှောက်ရောနှောအဆို့ရှင် core design ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသောကြွေအဆို့ရှင်အမာခံ၊ ၅ နှစ်ရေခံနိုင်သောအာမခံ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့ပါးသော S hower S et...
အစိုင်အခဲသောကြေးဝါအပူထိန်းကိရိယာအဆို့ရှင်အမာခံသည်ချေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လက်နှင့်ရေထိပ်ထိပ် ဦး ခေါင်းများသည်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောရေချိုးရန်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းခေါင်းကိုဆုံလည်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်ရေမှုန်ရေမွှားကိုစောင်းနိုင်သည်။ လျှောများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာချိန်ညှိနိုင်သည်။ riser rail...
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေချိုးခန်းစနစ်များသည်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စေရန်သေချာစေရန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေလောင်းနိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ ဥရောပအရည်အသွေးအစိတ်အပိုင်းများ။ ဒါကတကယ့်မိုးရေရေချိုးကန်ပါ။ ထူးခြားသော ၈ လက်မအရွယ် header သည်မိုးရွာရွာမှုခံစားမှုကိုပေးသည်။ Twin Head Rain Shower...
အသုံးဝင်သော Shower ရောနှောစက်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းကို နံရံပေါ်ရှိရေချိုးခန်း faucet ဖြင့်အသွင်ပြောင်းပေးသည် ။ ခေတ်မီသောဥရောပပုံစံများဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောရင်ပြင်နှင့်ပြားချပ်ချပ်ပုံစံသည်လက်ပန်းရေချိုးခန်းနှင့် overhead shower head combo...
သုံး function ကိုနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားရေချိုးခန်းရောနှော။ လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း faucet ။ ကြေးဝါရေချိုးခန်းရေချိုးကန်အရောနှော၊ ဆလိုက်ရေချိုးခန်းရောနှောစက်၊ နံရံပေါ်ကရေပန်းရေချိုးခန်း၊ ရေပန်းရော၊ ရေချိုးခန်းဘားအပါအ ၀ င်လက်ရေချိုးခန်း၊ ရေချိုးခန်း bracket ပါ ၀ င်သည်။ မိုးရေရေချိုးခန်းရေပန်းပါ ၀ င်သည်။ Chrome...
Ba throom ခေတ်ပြိုင်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ရေချိုးခန်းရောနှောခြင်း။ နှင်းဆီရွှေ ရေချိုးဆပ်စုပ်စက်ရောနှောခြင်း၊ ဖုံးအုပ်ထားသောရေချိုးခန်းရောနှောခြင်း၊ ရေချိုးခန်း mixer အဆို့ရှင်, handရေချိုးခန်း, ထိပ်ဆုံးရေချိုးခန်း, ရေချိုးခန်းကိုင်ဆောင်သူ, ရေချိုးခန်းရေပိုက်ပါဝင်သည်။ မိုးရေရေချိုးခန်းရေ faucet concelaed...
သုံး function ကိုနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားရေချိုးခန်းရောနှော။ လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း faucet ။ ရွှေ ရေချိုးခန်းသုံးရေချိုးခန်းအရောအနှောရောနှောခြင်း၊ ဆပ်ဆေးရောနှောဆေး၊ မိုးရွာသွန်းမှုရေမွှေး၊ ရေချိုးခန်းဘား၊ လက်ရေချိုးခန်း၊ ထိပ်ဆုံးရေ၊ အိတ်တံခါးတို့ပါ ၀ င်သည်။ နံရံအတွင်းမိုးရေရေချိုးခန်းရေပိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။...
သုံး function ကိုနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားရေချိုးခန်းရောနှော။ လက်ကိုင်ရေချိုးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း faucet ။ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သောရေချိုးခန်းသုံးရေချိုးခန်းအရောအနှော၊ ဆလိုက်ရေချိုးခန်းအရောအနှော၊ ၈ လက်မမိုးရွာသွန်းမှုရေပန်းရေချိုးခန်း၊ ရေချိုးခန်းဘား၊ လက်ရေချိုးခန်း၊ ထိပ်ရေ၊ ရေချိုးခန်း bracket တို့ပါ ၀ င်သည်။...
အနက်ရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသောရေချိုးခန်းရောနှောခြင်း၊ အရည်အသွေးရှိသောကြွေအဆို့ရှင်ကျည်တောင့်များ။ အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါတည်ဆောက်မှုသည်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်၊ ၈ လက်မမိုးရေဆေးရေလက်နှင့်လက်ရေမှုန်ရေမွှားပါသည့်လက်ကိုင်နှစ်ထပ်စနစ်။ ရေပန်းအမြင့် (slide bar) ကိုချိန်ညှိနိုင်သည် - ၇၀...
Brushed gold wall တပ်ဆင်ထားသောရေချိုးခန်းရောနှောခြင်း၊ အရည်အသွေးရှိသောကြွေအဆို့ရှင်ကျည်တောင့်များ။ အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါတည်ဆောက်မှုသည်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်၊ ၈ လက်မမိုးရေပိုက်နှင့်လက်ရေမှုန်ရေမွှားပါသည့်လက်ကိုင်နှစ်ထပ်စနစ်။ ရေပန်းအမြင့် (slide bar) ကိုချိန်ညှိနိုင်သည် - ၇၀ စင်တီမီတာ - ၁၂၀ စင်တီမီတာ...
နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့် ရေချိုးခန်းအခန်းသုံးခန်းပါလုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုပါ ၀ င်သည့် မိုးရေရေပန်း Faucet၊ ၈ လက်မ Rain Shower Faucet၊ ABS ကိုယ်တိုင်စင်ကြယ်သောမိုးရွာသွန်းမှု ထိပ်တန်းအဆင့် Shower Head နှင့်အတူ ABS လက်ရေချိုးခန်း၊ သုံးမျိုးသည်ကြေးဝါခရုမ်းဖြစ်သည် ခလုတ်ခုံတစ်ခုတည်းလက်ကိုင်လက်ကိုင် Shower Mixer Valve (faucet,...
တရုတ်နိုင်ငံ မိုးရေဖျော်စက် ပေးသွင်း
မိုးရေစက်ရောနှောခြင်းသည်ရေချိုးခန်းခန်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးနံရံနှစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်လွတ်လပ်သော switch ကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထုတ်ကုန်တွင်ရေပေးသောလုပ်ဆောင်ချက် (၃) ခုရှိသည်။ (က။ ထိပ်ဆုံးရေ၊ ခလက်ရေချိုးခန်း၊ စီထွက်ပေါက် faucet) ။ ရေပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို diverter မှထိန်းချုပ်သည်။ ရေချိုးခန်းအရောအနှောများကို ၈ စင်တီမီတာ (၂၀ စင်တီမီတာ) ABS (အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်) နှင့်အတူအလွန်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ သံမဏိပိုက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Chrome-plated ပြီးဆုံး။ နူးညံ့သောဆီလီကွန်ဖြင့်ထွက်သောပမာဏသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာစီးဆင်းသည်။ အမြင့် ၃၀၀ မီလီမီတာအမြင့်ရှိချောမွေ့သောကွေးကောက်ပိုက်ကို (ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်ရှည်သောလူတို့အတွက်သင့်တော်ပြီးအလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည်) ။ ရေချိုးခန်းအိတ်ချောကိုချောချောမွေ့မွေ့လှည့်ပြီးထောင့်ပေါင်းစုံဖြင့်လှည့်နိုင်သည်။ 1.5m သံမဏိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေပိုက်နှင့်တစ် ဦး သို့မဟုတ်သုံးခုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလက်ရေချိုးခန်းနှင့်အတူ။
8 လက်မမိုးရေပန်း Faucet
Dual Handle ရေချိုးခန်းအရောအနှော